Noocyada Cuntada ah Noocyada ugu Waaweyn Email Spam Filters Waa inaad Isku daydaa
Igor Gamanenko, oo ah Semt Maamulaha Guusha Macaamiil, wuxuu sheegay in imika spam uu noqday magac qoys, boqolkiiba siddeetan boqolkiiba dhammaan taraafikada tarjubaanku waa wax aan faa'iido lahayn oo aan micno lahayn. Waxay micnaheedu tahay in waraaqaha firfircoon e-maylka aysan suurtagal ahayn iyada oo aan la helin ilaalin spam. Dhanka kale, email-ka ganacsi ee aan la dooneyn (UCE) waa fariin digtooni ah oo loo yaqaan 'spam'. Xaaladaha qaarkood, waa wax aan dhib lahayn oo aan wax dhibaato ah keenin, laakiin marmarka qaarkood, waxay xiri karaan nidaamyada iyo fayrasyada xun ee labada nidaamka kombiyuutarkaaga iyo website-kaaga. Iyadoo la tixgelinayo tiro badan oo emails ah oo loo soo diray caalamka, waa in aad isha ku haysaa emailka spam emailka oo aad isku daydid in aad hesho mid ka mid ah shuruudahaaga.
Xayeysiin fara badan oo dadka waaweyn ah:
Spam mawduucyada dadka waaweyn waa mid ka mid ah noocyada ugu caansan e-mailka spam iyo filter-ka loo isticmaalo waxaa sidoo kale lagu magacaabaa filitaanka spam dadka waaweyn - orange county plumbing services. Mararka qaar kombiyuutarada iyo spameradu waxay dadka u adeegsadaan badeecooyin iyo adeegyo loogu talagalay inay kor u qaadaan awoodda galmada. Waxay dib ugu celiyaan boggooda internetka ama xayeysiiskooda iyo waxay doonayaan inay kor u qaadaan waxyaabahaas internetka. Sanado yar gudahood, dadku waxay billaabeen inay abuuraan shaandheyn loogu talagalay dadka waaweyn ee spam..Si aad u abuurto shaandhadaas, waa inaad tagtaa goobta Falanqaynta cinwaanka emailkaaga, waxaad abuurtaa shaandhad iyo ku dar URL ah goobta bogga qaangaarka ee kugu soo boodey wakhti yar.
Saamiyada spam ee caafimaadka iyo daawooyinka:
Nooca noocan ah ee emailka spam ayaa faa'iido u leh bogagga iyo dadka soo dira xayeesiinta xayeysiinta miisaanka luminta, daaweynta maqaarka, daawooyinka kobcinta maqaarka, dawooyinka aan caadiga ahayn iyo shiinaha, iyo sidoo kale cunto dheellitiran. Haddii aad leedahay bog internet, waxaad ku dari kartaa plugin WordPress ah oo khuseeya si looga hortago spamkan. Haddii aad heshay dalabaadyadaas been abuurka ah ee emailkaaga, waa inaad si fudud u abuurtaa shaandhad iyo ku darsato aqoonsiyada buuggan si ay uga hortagaan in ay kuu diraan farriimaha dhibka ee mustaqbalka.
Falanqeeyayaasha spam siyaasadeed:
Spam siyaasadeed ayaa ku faafaya qaabka hanjabaad siyaasadeed iyo hawlaha dhuumashada. Xagjireyaasha, argagixisada, iyo kuwa jilayaasha ah ayaa ku lug leh faafinta boggan internetka. Iyagu waa dad fikrado xun xun oo ixtiraamaya qiyamka aadanaha. Taasi waa sababta ay kugula socdaan emailadaada spammy oo dhan maalinta oo dhan ha ka warqabin siyaasadaha amniga ama sharciga fulinta. Soodhadhka sir-doonka ee siyaasaddu waa sahlan tahay in la abuuro, waxayna kaa caawin karaan inaad ka takhalusaan emaylkan shakiga ah, khatarta iman karta, iyo khatarta ah inaad lumiso lacagtaada
Waa run in spam, viruseska, nacaybka iyo emails qashinka ah ay khatar weyn ku yihiin dadka isticmaala internetka. Hackers iyo spamers waxay isticmaalaan farsamooyin kala duwan si ay naga dhigaan oo ay wax xadaan lacagteenna. Haddii aadan abuurin wax feyl ah e-mail-ka, waa inaad ka fogaataa emails-da aan la raadin oo ay ka mid noqon karto ganacsiga sharci-darrada ah, jawaab-celin toos ah, fayruusyo, naceyb, iyo dhammaan noocyada spam oo keeni kara dhibaatooyin culus. Hal dhinac ama tan kale, spam emailka waa arrin aad u weyn, laakiin filtarradu way jiraan si loo xalliyo dhibaatooyinka intiisa badan internetka.